Home Facilities & Services Operation Theater City Hospital Mandalay Facilities & Services
Computerized Laboratory Service
CT-Scan , C-arm and X-ray Service
Healthcare Club Member
If you wish to join membership or have any queries, please contact Patient Relationship Center (PRC). Phone: +959-2054163, +959-402588253
Objective of Healthcare Club:
~Achieve happiness with good health~
1. Members will get free initial health check-ups, yearly health check ups that includes laboratory tests (Urine RE, Stool RE, Fasting Blood Sugar test, cardio- examination, X-ray).
2. Members will be able to make appointments for consultations with Specialist Doctors in advance. Members will be given priority status, avoiding the queue.
3. When utilizing the diagnostic facilities (as instructed by the consulting doctor), members will be given priority, reducing less waiting time for report.
4. Members will receive 5% discount for all diagnostic procedures.
5. Members will receive 2% discount for their prescribed medications at our 24-hr Pharmacy.
6. 10% discount is also given for all ambulance services.
7. Members will be discounted 5% for in-patient room fees.
8. Members will receive 5% discount for operation theatre room fees and labour room fees.
9. Members will receive health-related educational pamphlets and information booklets.
10.For members of3years and longer, they will be givenaDiamond Card. For these members, there will be 8% discount for all diagnostic procedures, 3% discount for medications and 10% discount for all room fees.
*Members must be able to present their membership card to be able to receive the exclusive benefits.
1. All age group is eligible.
2. Chronic patients area also eligible for membership.
3. Drug users are not able to apply for membership.
4. Membership entry fee is 100,000 Kyats, and yearly renewal fee is 50,000 Kyats.
5. Members’ Children who are under the age of5will also be considered as ‘members’ without having to pay any fees, (given that the children were delivered in Nyein or City Hospital).
Termination of Membership: Membership will become invalid
1. If annual renewal fee is not received after one year.
2. If the members decide to terminate their membership.
3. If the member passes away.
4. If the members participate in criminal offence.
*Membership fees will not be refunded under any conditions.
1. Members must present their membership card to City Hospital.
2. You cannot transfer the card to any other parties.
3. Please notify Nyein or City Hosptial if you lose your membership card. There will be fees for replacement membership card.
4. Please update any change in your address with Nyein or City Hospital.
5. Membership renewal fees can be paid within one month of card expiry.
လူတိုင်းကျန်းမာ၊ စိတ်ချမ်းသာ၊ ရောဂါဘယဘေး၊ ကင်းစင်ဝေး၊ ငြိမ်းအေးကြစေရန်။
၁။ အသင်းသားတစ်ဦးချင်းအတွက် ပဏာမ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း၊နှစ်စဉ် ၏တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် ပုံမှန်ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဓါတ်ခွဲခန်း စစ်ဆေးခြင်းများ(ဆီး၊ဝမ်း၊သွေးနီအား၊အဆီဓါတ်၊အချိုဓါတ်၊နှလုံးစမ်းခြင်း၊ ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း) တို့အတွက် ကျသင့်ငွေထပ်မံပေးဆောင်စရာမလိုခြင်း။
Type I (For General Patient)
[ Urine RE , Stool RE , Haemogram , ESR ,Fasting Lipit Profile , Fasting Sugar , Urea , Creatinine , L.F.T , ECG , CXR, USG]
(Initial Free Medical Check up and yearly check-up)
Type II ( For Renal Patient )
[ Urine RE , Stool RE , Haemogram , ESR ,Fasting Lipit Profile , Fasting Sugar , Urea & Electrolyte (U&E) ,Creatinine , L.F.T , ECG , CXR, USG]
Type III ( For liver Patient )
[ Urine RE , Stool RE , Haemogram , ESR ,Fasting Lipit Profile , Fasting Sugar , Urea , Liver Profile , AEP , OSPT , Creatinine , ECG , CXR, USG]
၂။ အသင်းသားများသည် အထူးကုဆရာဝန်ကြီများကို တွေ့ဆုံရန်နှင့် အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများနှင့်တွေ့နိုင်မည့်အချိန်ကို ဆေးခန်းမှ ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းကြောင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ စောင့်ဆိုင်းရခြင်းမရှိဘဲ လျင်မြန်စွာ ပြသနိုင်ရန် ဦးစားပေးအဆင့် ရရှိစေခြင်း။
၃။ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများညွှန်ကြားသောဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများ၊ ဓါတ်မှန် စစ်ဆေးမှုများ၊တီဗွီဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းများကို ဦးစားပေးအမြန်ဆုံး ပြည့်စုံအောင်ဆာင်ရွက်ပေးမှုရရှိစေခြင်း။
၄။ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများညွှန်ကြားသည့် ဆေးဝါးများကို သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းထက် (၂%) လျော့၍ ၂၄-နာရိ ရောင်းချပေးခြင်း။
၅။ အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်ကို အသုံးပြုပါက အသုံးပြုခ (၁ဝ%) သက်သာမှုရရှိခြင်း။
၆။ ဆေးအဖွဲ့ပါသော အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်ကို အသုံးပြုပါက အသုံးပြုခ (၁ဝ%) သက်သာမှုရရှိခြင်း
၇။ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သိသင့်သိထိုက်သောအချက်များ၊ ကျန်းမာရေးပညာပေးစာစောင်များကို အသင်းသားများထံသို့ အခမဲ့ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း။
၈။ အခြားရောဂါရှာဖွေရေး စမ်းသပ်မှုများအတွက် (၅%) လျော့ပေးခြင်း။
၉။ အတွင်းလူနာအဖြစ်တတ်ရောက်ပါက အခန်းခ (၅%) သက်သာမှု ရရှိ်ခြင်း။
၁၀။ ခွဲစိတ်ရမည့်လူနာဖြစ်ပါက ခွဲစိတ်ခနးခ (၅%) သက်သာမှု ရရှိ်ခြင်း။
၁၁။ မွေးလူနာဆိုပါက မွေးခန်းခ (၅%) သက်သာမှု ရရှိ်ခြင်း။
၁၂။ အသင်းသားသည် ဆေးခန်းသို့ ဆေးစစ်ခြင်း၊ ဆေးကုသခြင်းအတွက် လာရောက်ရာတွင် အသင်းဝင်ကဒ်များကို ယူဆောင်လာခြင်းဖြင့် အထက်ဖော်ပြပါ အခွင့်အရေးမားကိုရရှိစေပါမည်။အသင်းဝင်ကဒ်ပြားများ ယူဆောင်လာခြင်းမရှိပါက ဖော်ပြပါ အခွင့်အရေးများကို ခံစားခွင့်မရှိပါ။
၁၃။ ၃ နှစ် နှင့်အထက် အသင်းဝင်သော အသင်းသားများအား Diamond Card ဖြင့်ချီးမြှင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။ဆေးဝါးများကို (၃%) ၊ ရောဂါရှာဖွေမှုများကို (၈%) ၊ လူနာအခန်းခများကို (၁ဝ%) သက်သာမှု ရရှိစေခြင်း။
၁။ အသက်အရွယ် ကန့်သတ်မှုမရှိ။
၂။ နာတာရှည် ရောဂါရှိသူများအတွက်လည်း အသင်းဝင်ခွင့်ပြုသည်။
၃။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများကို အသင်းဝင်ခွင့်မပြု။
၄။ အသင်းသားဖြစ်မြောက်ရန်အတွက် တစ်ဦးလျှင် အသင်းဝင်ကြေး ငွေကျပ်( ) နှင့် နှစ်စဉ်ကြေးကို Type I လူနာများအတွက် ( )၊ Type II လူနာများအတွက် ( ) ၊ Type III လူနာများအတွက် ( ) ထည့်ဝင်ရပါမည်။ နှစ်စဉ်ကြေးမှာ အခါအားလျော်စွာ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
၅။ မိသားစုဝင် (အတူနေ) ၅-နှစ်အောက် ကလေးများအတွက် နှစ်စဉ်ကြေးပေးရန်မလိုပါ။အသင်းသားလူကြီးပေးသွင်းထားသည့် အသင်းဝင်ကြေး ကျပ် ( )မှ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်သည်။လူကြီးအသင်းသားကဲ့သို့ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိမည်။ ဤဆေးခန်းတွင် မွေးသောကလေးများသာ အကျုံးဝင်သည်။
အောက်ပါအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် အသင်းသားအဖြစ်မှ ရပ်စဲသည်ဟု သတ်မှတ်မည်။
၁။ နှစ်စဉ်အသင်းဝင်ကြေး ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း။
၂။ မိမိဆန္ဒအလျောက်အသင်းသားအဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခြင်း။
၄။ အစိုးရပြစ်ဒဏ် တစ်ခုခုကျခံရခြင်း။
မည်သည့် အကြောင်းကြောင့်မှ အသင်းဝင်ကြေးကို ပြန်လည်ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။
၁။ ဆေးခန်းသို့လာတိုင်း အသင်းဝင်ကဒ်ကို ယူဆောင်လာရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၂။ အသင်းဝင်ကဒ်ပြားကို လွှဲပြောင်းရောင်းချခွင့်မရှိပါ။
၃။ အသင်းဝင်ကဒ်ပျောက်ဆုံးပါက ညိမ်း (သို့) မြို့တော်ဆေးရုံသို့ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်။ ကဒ်ပြားတန်ဖိုးပေးဆောင်၍ ကဒ်အသစ်ထုတ်ယူရမည်။
၄။ အသင်းဝင်သည် လိပ်စာပြောင်းလဲမှုရှိပါက အကြောင်းကြားရမည်။
၅။ နှစ်စဉ်ကြေးကို သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်မှ တစ်လအတွင်း ပေးသွင်းရမည်။
၁။ နှစ်စဉ် ပုံမှန်ဆေးစစ်မှု ခံယူနိုင်ခြင်း၊ ဆေးစစ်ခံရန်မေ့လျော့မှုမရှိတော့ခြင်း။
၂။ ရောဂါကြိုတင်သိရှိရ၍ ကြိုတင်ကာကွယ်မှု၊ အချိန်မှီ ဆေးဝါးကုသမှု ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း။
၃။ ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာစေခြင်း။
၄။ အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းမှု သက်သာစေခြင်း။
၅။ ကျန်းမာရေးပညာပေး၊ လက်ကမ်းစာစောင်များ အခမဲ့ဖတ်ရှုနေရခြင်း။
၆။ ကျန်းမာရေးကို ပိုမို ဂရုစိုက်လာသောကြောင့် လူ့သက်တမ်းစေ့ နေနိုင်စေခြင်း။
၇။ ကျန်းမာခြင်းသည် ... လာဘ်ကြီးတစ်ပါး ၊ ကျန်းမာခြင်းသည် ချမ်းသာခြင်းအစစ် ဟု ပိုမို အသိဝင်လာစေခြင်း။
၈။ အသင်းဝင်ဖြစ်ပြီးပါက ညိမ်း နှင့် မြို့တော် မည်သည့်ဆေးရုံတွင်မဆိုအကျိုးခံစားခွင့် ရရှိစေခြင်း။
ညိမ်း နှင့် မြို့တော် ဆေးရုံများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအသင်းဝင်လိုပါက Patient Relationship Center(PRC) ဌာနသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Help Line : 09-2054163, 09-402588253
အရေးပေါ်လူနာများကို ၂၄ နာရီ လက်ခံကုသပေးနိုင်သော အရေးပေါ်ကုသဌာနရှိပါသည်။ အရေးပေါ် လူနာကုသခန်း(၄)ခန်း ရှိပါသည်။
Check-up for couples
- History and Physical/General Examination
- Chonesterol / Fasting Lipid profile
- Urea , Electrolyte , Creatinine
- Liver Function Tests ,AST
- HBsAg , Anti-HCV
- Retro Viral Antibody
- Urein RE
- Urein C&S
- USG (Abd )
For Female - Pap Smear
Check-up for over 40 years of age
- Bone Function
- Lipid Profile (Random, Fasting)
- Blood Sugar, Urine Sugar
- T3, T4, TSH, FT3, FT4
- Elastography (If necessary) - Urein RE, Stool RE
- HBsAg , Anti-HCV, Retroviral Antibodies
- CA 125, CS 153 - Pap Smera, HPV, Mammogram
Check-up for vacancy
- HIV Ab
- Urine RE
- Stool RE
- CXR (PA)
- USG (Abd)
Prevent the disease by regular vaccination
- HBs Ag before vaccination
- Tetatus Toyoid
- HPV vaccine (for Ca Cervix)
- Flu vaccine Dipthena,Pertusis,Tetanus(DPT vaccine)
- Measles,Mumps,Rubella (MMR)vaccine
Contact Us for more detailed explanation, booking/tooking, advise to choose suitable package and recommendation of Check-up results.
HELP LINE : 09-402631052, 09-402711488, 09-402588253
Whether for an emergency treatment orapreventive reason, there could beatime in anyone’s life where surgery is needed. When the time comes, When you are confronted with this kind of situation, sometimes it can be avoided but sometimes it can be life threatening if untreated. For example, Many cases of appendicitis require removal of the inflamed appendix by laparotomy or laparoscopy due to the high mortality associated with rupture of the appendix, which may lead to severe complications such as peritonitis and sepsis.
Therefore it is vital for the patient to be able to getaprompt operation done successfully without any threat. At city hospital we provide services like these with well equipped and modernized operating theatre, including three major, one minor and one septic room.
လူတိုင်းလူတိုင်းတွင် ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးပေါ်သော် လည်းကောင်း၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်၍သော် လည်းကောင်း ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရသည့် အခြေအနေမျိုး ပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါသည်။ ပေါ်ပေါက်နိုင်ပါသည်။ထိုကဲ့သို့ပေါ်ပေါက်လာပါက ခွဲစိတ်ကုသမှုကို ရှောင်လွှဲ၍ ရနိုင်သောရောဂါများရှိသလို၊ မဖြစ်မနေအချိန်မီ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရသော ရောဂါမျိုးများလည်း ရှိပါသည်။ (ဥပမာ-အူအတက်ယောင်ရာမှ အနာဖြစ်၍ ဝမ်းဗိုက်အတွင်းပေါက်သွားခြင်း၊ အစာအိမ်ပေါက်ခြင်း) ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်လာပါက အချိန်မီခွဲစိတ်ကုသ မှုခံယူနိုင်မှသာ ရောဂါပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။
နောက်ကျသောအခြေအနေတွင် ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရပါကလူနာ၏ အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ထို့ကြောင့် အချိန်မီခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူနိုင်ဖို့နှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ခွဲစိတ်ကုသမှုအောင်မြင်ရေးသည် လူနာအတွက် အရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ပါသည်။
ဤအချက်များကိုပြည့်စုံစွာ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အဆင့်မြင့်မြို့တော်ဆေးရုံခွဲစိတ်မှုဌာနမှ စီစဉ်ဆောင် ရွက်ပေးထားပါသည်။
Well equipped & Modernized Operating Theatre
- Eight OT rooms
- 100 class ultra clean Operating Theatre
- Unidirectional and laminar air flow system
At our City Hospital surgical department, special sterile technique, called 100 Class, are used in two operating rooms. There are also three Operating Theatres that uses unidirectional and laminar airflow system. All our operating rooms also contain. Apart from modernised defibrillators, anaesthetic machine, sterile surgical instruments, all our operating rooms also contain C-Arm X-ray. Modern surgical technique such as laparoscopic surgery, which only requiresasmall incision on the body, is used to treat appendicitis, pancreatitis and stone formations. Moreover, the experienced professionals are treating kidneys and renal problems using stone-dissolving techniques such as laser lithotripsy, ultrasonic lithotripsy and electrokinetic lithotripsy.
မြို့တော်ဆေးရုံခွဲစိတ်မှုဌာနတွင် အထူးပိုးမွှားကင်းစင်သော (100 Class Operating Theater) နှစ်ခန်းနှင့် ပိုးမွှားကင်းစင်ပြီး
လေဝင် လေထွက်စနစ် (Unidirectional and Laminar Air Flow System) တပ်ဆင်ထားသော ခွဲစိတ်ခန်းရှစ် ခန်းရှိပါသည်။ ယင်းခွဲစိတ်ခန်းများတွင်ခေတ်မီအသက် ကယ်ကိရိယာများ၊ မေ့ဆေးစက်များ၊ ခွဲစိတ်ကိရိယာ များ အပြင်၊ ခွဲစိတ်နေစဉ် ဓါတ်မှန်ရိုက်စစ်ဆေးကြည့် ရူနိုင်သော C-Arm X-ray စက် တပ်ဆင်ထားပါ သည်။ ခွဲစိတ်မှုဌာနတွင် နောက်ဆုံးပေါ် Minimally Invasive Surgery ခေါ်အပေါက်ဖောက်၍ ခွဲစိတ် ကုသမှုများဖြစ်သော Laparoscopic Surgery ဖြင့် အူအတက်ရောင်ခြင်း၊ သည်းခြေအိတ်ရောင်ခြင်း၊ ကျောက်တည်ခြင်းများကို ကုသပေးနိုင်ပါသည်။ ဤ ခေတ်မီအပေါက်ဖောက်နည်းပညာဖြင့် ကုသမှုခံယူခြင်း အားဖြင့် လူနာဝေဒနာခံစားရမှုသက်သာခြင်း၊ ဆေးရုံ တွင်နေရသည့် အချိန်ကာလတိုတောင်းခြင်း၊ ကြီးမားသည့်အနာရွတ်ထင်မကျန်ခဲ့ခြင်း စသည့်အကျိုးကျေးဇူးများ ခံစားရပါသည်။ ထို့ပြင် ကျောက်ကပ်နှင့်ဆီးလမ်းကြောင်း ကျောက်တည်ခြင်းလူနာများအတွက် (Laser Lithotripsy) လေဆာရောင်ခြည်ဖြင့် (Ultrasonic Lithotripsy) အသံလွန်လှိုင်းဖြင့် (Electrokinetic Lithotripsy) လျှပ်စစ်လှိုင်းဖြင့် ကျောက်ခြေခြင်းများကိုပြုလုပ်နိုင်ရန် အတွက် ခေတ်မီစက် ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားရှိပြီး ဝါရင့်ကျွမ်းကျင်သော ဆရာဝန်ကြီးများကိုယ်တိုင် ခွဲစိတ်ကုသပေးနေပါသည်။
Inpatient Room Category